Archive du 20170120
Vangaindrano Efa tany miady�
Nitohy ny sakoroka sy ny fifandonana tany Vangaindrano omaly alakamisy. Noho ny tsy famelana ireo vahoaka hanatanteraka ilay fitsaram-bahoaka efa ho andro vitsy izay, dia nihamafy hatrany ny hetsiky ny mponina omaly, ka niafara tamin�ny famotehan-javatra
JIRAMA Voadaka ny Tale Jeneraly
Efa mamay be ny toe-draharaha, mahery vaika ny fimenomenomana sy ny hatezerana koa dia tsy maintsy nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana ka natao sorona sy nesorina ny tale jeneralin�ny Jirama Nestor Razafindroriaka.
Marc Ravalomanana Mbola tena akaikin'ny Amerikanina
Hotanterahina anio ny fianianan�ny Filoha Amerikanina vaovao Donald Trump, ka anisan�ny miatrika izany ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana.
Famatsiana solika ny Jirama Nailika ny �Madagascar Oil� ?
Ianjadian�olana ny orinasa mpitrandraka solika �Madagascar Oil� any Tsimiroro amin�izao fotoana izao.